Printsy vavy Anglisy Anne Elisabeth Nitsidika an’Ambositra sy Soatanana
Kolikoly sy fanodikodinam-bola Manampahefana maro teo aloha hotsaraina
Aferana kolikoly avo lenta maro no hiakatra indray eo anivon’ny PAC (Pôle Anti-Corruption) amin’ity volana ity, izay tafiditra ao anatin’ny andiany faharoa amin’ny fitsarana mandeha satria ny 19 aogositra ka hatramin’ny 27 aogositra ny adiany voalohany.
Centre Immatriculateur de Madagascar
« Permis » 21.205 sy « carte grise » 7.835 no vita tao anatin’ny 5 volana
Famarotana tany eto Antananarivo Ny olon’ny fitondrana ihany no voatsindrona
Aoka izay ny kolikoly, aoka izay ny fanararaotam-pahefana, … aoka izay ny fivarotana ny tanin’ny kaominina. Manaiky ve isika ny hivarotana ny zaridainan’Antananinarenina, avereno amin’ny kaominina ny taniny,…
Notorian’ny fanjakana Hotsaraina anio ireo mpanao gazety
Anio alatsinainy 16 septambra ny fitsarana ny raharaha fanenjehana mpanao gazety miisa 3 sy ny Talen’ny kolontsaina eo anivon’ny kaominina Antananarivo tamin’ilay raharaha mahakasika ny fisidinana angidimby tao anatin’ny kianjaben’i Mahamasina ny 30 aogositra,
Talen`ny Tranompirintim-pirenena Nesorina fa sahy niteny ny marina ?
Nivoaka nandritry ny filankevitry ny minisitra ny 11 septambra lasa teo fa voatendry ho Talen’ny Tranompiritim-pirenena Rajaofetra Andry Nirina araka ny tolo-kevitry ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
Olana ara-taratasy Ahiana hifandramatra ny samy mpino Silamo
Ahiana hivadika zavatra hafa ny olana misy eo amin’ny samy mpino Silamo.
Distrikan`Avaradrano Hahazo lapan’ny fitsarana eny Ambohitrabiby
Tontosa ny 10 septambra lasa teo, ny fametrahana ny vato fototry ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao amin’ny Distrikan’Avaradrano,
Nisy ny lamesa lehibe notanterahina teny amin’ny Katedraly Saint Laurent Ambohimanoro omaly talata 24 oktobra, nenti-nanamarika ny faha-200 taonan’ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin’i Madagasikara sy ny fanjakana Anglisy.
Niatrika izany ny Printsy vavy Anglisy Anne Elisabeth sy ny vadiny, Sir Tim Lauvrence sy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady. Nitarika io fotoam-pivavahana lehibe io ny Mgr Samoela Jaona Ranarivelo. Nambarany fa ny fiombonana sy ny firahalahiana, dia tsy eo amin’ny vahoaka Britanika sy ny Malagasy ihany fa eo amin’ny vahoaka rehetra tokony hisitraka ny fandriampahalemana sy ny fanambinana. Nivoitra tamin’ny lahateniny koa ny ratran’ny tantara rehetra nolalovana tany aloha, toy ny fanandevozana, izay tokony hakana lesona. Kihon-dalana lehibe eo amin’ny tantara ny faha-200 taonan’ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’ny tany roa tonta, hoy izy. Manana adidy lehibe hanarenana ny ratran’ny lasa ny tsirairay, mba hahafahana manorina hoavy mamiratra, araka ny sitrapon’andriamanitra, hoy hatrany ity Raiamandreny am-panahy ity. Ankoatra izay, nitsidika ny fokontanin’i Soatanana sy Faliarivo ny Andriambavy Anne Elisabeth, niaraka tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina. Ireo fokontany ireo no anisan’ny hiasan’ny ONG Ny Tanintsika sy Feedback Madagascar, miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana manatanteraka tetikasa fitantanana sy fiarovana ny ala tapia sy ny fanohanana ny seha-pamokarana landy any amin'ny faritra Amoron'i Mania. Vehivavy maherin'ny 40 no nahazo fampiofanana amin'ny fanenomana landy tao Soatanana. Ankoatra izay, misy ihany koa ireo vondron'ny mpianatra anglisy tonga any amin'ny faritra isan-taona tafiditra amin’ny fiaraha-miasa amin'ny Feedback Madagascar, ho an'ny hetsika ara-tsosialy any amin'ny faritra ambanivohitra.